जहाँ जनावरहरुले पनि रोजगार पाइरहेका छन्
एजेन्सी, ४ भाद्र । विश्वका धेरै देशहरुमा मानिसहरु बेजरोजगारीको समस्यासँग दिनहुँ जुझिरहेका छन् । रोजीरोटीको अभावमा रोजगारीको तलाशमा पृथ्वीको चक्कर काटिरहेका यद्यपि उचित रोजगारी र पैसा मिल्न मुस्किल छ ।
यस्तो दुर्दशा देखिरहेका मानिसहरुका लागि यो सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ कि विश्वमा यस्तो पनि ठाउँ छ जहाँ मानिसलाई त रोजगारी छँदै छ, त्यहाँ जनावरहरु पनि रोजगार छन् ।
यो मामिला हो हाम्रो छिमेकी देश भारतको । त्यहाँस्थित आगर प्रहरी कार्यालयमा एक लंगूरलाई तैनाथ गरिएको छ । लंगूरलाई तैनाथ गर्नुको पछाडिको कारण भनेको आगराको कलेक्ट्रेट कार्यालयमा बाँदरको आतंक निकै बढेको थियो । यसले गर्दा त्यहाँका डीएम, एसएसपी कार्यालयका साथै अन्य विभागका कामहरु पनि प्रभावित भएका थिए ।
सूचनाका अनुसार बाँदरहरु यति निर्भय भएका थिए कि उनीहरुले कार्यालयका कागजातहरु पनि च्यात्न थालेका थिए । बाँदरहरुको आतंक बढेपछि त्यहाँका एसएसपी अमित पाठकले एसएसपी आगराका कार्यलयमा लंगूर तैनाथ गर्ने आदेश दिएका थिए । यसपछि त्यहाँ लंगूर नियुक्तिसँगै उसलाई बाँदर भगाउने प्रशिक्षण पनि दिइएको थियो । अहिले त्यहाँ स्थितिमा सुधार आएको छ र बाँदरहरुको आतंकमा कमि पनि आएको छ ।
यस अघि विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च ईन्जिन गुगलको मूख्यालयमा पनि बाख्राहरुलाई काममा राखिएको थियो । त्यहाँ एउटा हैन दुई सयवटा बाख्रा कर्मचारीहरु थिए ।
ती बाख्राहरुलाई पनि तलब पनि दिइन्थ्यो । ती बाख्राहरुको काम त्यहाँको ठूलो चौरमा पलाएका घाँसहरुमा चर्ने थियो । यसले कार्यालयको चौरलाई सफा राख्न मद्दत गर्दथ्यो । गुगलले घाँस काट्नका लागि मेशिन प्रयोग गरेको थिएन किनभने त्यसबाट निस्कने धुँवा र आवाजले कर्मचारीहरुलाई समस्यामा पार्दथ्यो । गूगलले आफ्नो ब्लगमा त्यसबारे जानकारी दिएको थियो ।
यस्तो पनि, विश्‍व
एक सय ५१ जना सन्तान जन्माएका बाबु भन्छन्- ‘यो वर्ष सत्रौं श्रीमति भित्र्याउने हो’
खोरबाट निस्केको अजिङ्गर हराएपछि योकोहामामा खैलाबैला, खोजी कार्य जारी
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीले भोन पोष्टलाई लेखेका प्रेमपत्र बिक्री हुँदै
जीवन शैली, यस्तो पनि
चर्चामा भाजपाकी झुपडीवाली सांसद
मानव तस्करको फन्दामा परेका झण्डै सय आप्रवासी यस्तो अवस्थामा फेला परे
कोरोनासँगै सामाजिक बहिष्करण बढ्दै, ७० वर्षीय वृद्धले आफै बोके श्रीमतिको शव
चिनियाँ महिलाले आफ्ना पतिलाई किन खुवाइरहेका छन् यो औषधि ?
कोरोना संक्रमितको ज्यान बचाउन महँगो कार र सुन बेचे
छोरी जन्मिएपछि खुशीको सीमै रहेन, श्रीमतिलाई हेलिकप्टरमा राखेर घर ल्याए
कोरोनाको औषधि भन्दै पाउडर बेचेपछि…
रक्सीको ह्याङओभरबारे नयाँ अध्ययन यसो भन्छ
यस्तो थियो कुनै बेला अस्तित्वमा रहेको नयाँ प्रजातिको डाइनोसर
अर्थ / व्यापार, यस्तो पनि, विश्‍व
बेलायतका सबैभन्दा ठूला जमीन्दार युएईका प्रधानमन्त्री, हालसम्म कति जग्गा किने ?
अनुसन्धानका नाममा निर्दोष जनावारमाथि क्रुर व्यवहार गर्ने ल्याब बन्द गरियो
खेलकुद, यस्तो पनि
गर्भमा आठ महिने शिशु बोकेर टेक्वान्डोमा स्वर्ण जितेपछि सर्वत्र चर्चा
छिटो खोप लगाउँदा पद नै चैट
रेज रुम: जहाँ गएर तपाईं तोडफोडका साथ रिस पोख्न सक्नुहुन्छ
बोरिस जोनसनबारे पूर्व प्रेमिकाले गरिन् सनसनीपूर्ण खुलासा
चीनमा ३ हजार वर्ष पुरानाे सुनकाे मास्क भेटियाे
कङ्गोमा राष्ट्रपतिको चुनाव, एन्गुसो पुनः राष्ट्रपति उम्मेदवार
गाजामा इजरायली बर्बरता, ‘इजरायलको बहिष्कार गरौं’ भन्दै विश्वभर प्रदर्शन
एजेन्सी, २ जेष्ठ । गाजा पट्टीमा जारी इजरायली बमबारी र गोलाबारी सातौं दिनमा प्रवेश गरेको छ । आइतबार सबेरै गरिएको हवाइ हमलामा...